बीचमा बजेट स्मार्टफोन नोकिया 1030 मोडेल ठूलो माग छ। हामी सामान्य मापदण्डहरू devaysa कुरा भने, प्रदर्शन5इन्च सेट गरिएको छ। उपकरण संकल्प मा दस्तावेज अनुसार 800 X 480 पिक्सेल छ। निम्नानुसार यस परिमार्जन मा आयाम हो: चौडाई 77,7 मिमी, उचाइ 141,4 मिमी, मोटाई 10.9 मिमि। आवास क्लासिकल प्रकार संग प्रदान गरिएको छ। अन्त्यमा यो दुई सिम कार्ड उपकरण समर्थन उल्लेख गर्नुपर्छ।
भर्नु उपकरण "नोकिया 1030"
नोकिया 1030 मा उपकरण एक एकदम गम्भीर प्रदान गर्दछ। मोडेल मा Thyristor ब्लक तीन आउटपुटहरू मा उपलब्ध छ। सीधा उच्च प्रदर्शन, पाठ्यक्रम, कारण शक्तिशाली प्रोसेसर गर्न प्रदान गरिएको छ। पालो मा, त्वरक मानक मोडेल मा स्थापित छ। को न्यूनाधिक dvuhperehodny छ र कंडेनसर संग सिस्टम मा शामिल। मोडेल "नोकिया 1030" को चालकता देखि एक गुणस्तर चयन स्थापना गरेर समस्या छ। तपाईं उपभोक्ताहरु को समीक्षा विश्वास भने, प्रणाली असफलता देखेको छैन। प्रोसेसर को कनवर्टर एक द्विध्रुवी प्रकार छ।
सञ्चार लागि उपकरण
संचार नोकिया लागि 1030 मोडेल राम्रो फिट। इन्टरनेट मालिकले सबै उपलब्ध स्वरूप प्रयोग गर्न मौका छ। ब्राउजर, यो सिस्टम सबै प्रकार समर्थन गर्दछ। आज, सबैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम "Google Chrome" हुन मानिन्छ। व्यक्तिगत डाटा को ढुवानी यसको मद्दत सम्झौता यसलाई एकदम सरल छ। यो पनि त्यहाँ उपस्थित ब्राउजरमा मिलाउने लागि धेरै उपकरण हो कि मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। प्रयोगकर्ताले द्रुत पहुँच उपकरणपट्टी को उपस्थिति परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
ट्याब को मात्रा मुख्य मेनु परिवर्तन। स्थानान्तरण बुकमार्क, बारी मा, सेटिङ ट्याबमा बाहिर छ। मोडेल "नोकिया 1030" मा नियमित सन्देशहरू एकदम सरल प्राप्त छ। यस मामला मा, कि लागि प्रतीक त्यहाँ पर्याप्त छ। सीधा भविष्यवाणी पाठ इनपुट सिस्टम प्रयोग बाहिर सेट गर्नुहोस्। आवश्यक छ भने, प्रयोगकर्ता सेटिङ ट्याब प्रयोग को संभावना छ पाठ को भाषा परिवर्तन। अडियो सन्देश नोकिया 1030 मोडेल समर्थन गर्दछ।
मोडेल मा क्यामेरा कस्तो स्थापित छ?
यस मामला मा निर्माता फरक ढाँचामा हुन्छ। यसको विपरीत र चमक, प्रयोगकर्ता आफ्नै अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, सेतो ब्यालेन्स समारोह पूर्वनिर्धारित सक्रिय छ। प्रकाश स्रोत क्यामेरा मेनु मार्फत चयन गरिएको छ। भिडियो गर्न मापदण्डहरू नियुक्त गर्न एक संभावना पनि छ। विशेष, मालिक स्ट्रिप्स चौरसाई को विकल्प प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। स्मृति कार्ड मा सम्पादन लागि तयार बनाएको तस्बिरहरू डाउनलोड सम्भव छ।
मान्छे एक स्मार्टफोन "नोकिया 1030 मा" मा क्यामेरा बारे के भनिरहेका छन्?
क्यामेरा स्मार्टफोन पछि नोकिया RM उपभोक्ताहरूको 1.030 समीक्षा सामान्यतया सकारात्मक प्राप्त गर्दछ। यो एक उच्च संकल्प शूटिंग संग जोडिएको छ। यो पनि क्यामेरा तपाईं अक्सर देख्न सक्नुहुन्छ तस्बिरहरू मा एक उत्कृष्ट stabilizer र धमिलो संग सुसज्जित छ मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। यस मामला मा, चमक व्यापक दायरामा समायोजित छ। तसर्थ, फोटो रोचक छन्। उपकरण मा प्रकाश संवेदनशीलता यो फुल्नु र खरीदारों हुनेछ, कन्फिगर गरिएको छ।
साथै, मालिकहरूले द्रुत-लक सुविधाहरु प्रशंसा गरेका छन्। यस मामला मा, राम्रो सहज जुम प्रयोग गर्नुहोस्। वर्तमान उदाहरणका मा ध्यान उत्कृष्ट छ। स्मार्ट फोन नोकिया RM 1030 मा रेकर्ड भिडियो अक्सर अवरोध छ। तर, क्यामेरा कमीकमजोरी अझै पनि छ। तिनीहरूले एक माइक्रोफोन संग एक ठूलो डिग्री लिङ्क छन्। तपाईं मालिकहरूको राय विश्वास गर्नुहुन्छ भने, केही अवस्थामा ध्वनि छैन लिखित गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, ठूलो भिडियोहरू अक्सर असफलताका कारण सुरक्षित छैन।
मिडिया प्लेयर को कार्य
निर्दिष्ट संगीत खेलाडी मा कार्य, त्यहाँ एकदम केहि छन्। स्टेरियो सेटिङ प्रयोगकर्ता खेलाडी मेनुबाट निर्दिष्ट गर्न सक्षम छ। यस मोडेल भएको भिजुअल छविको प्रकार्य। तुरुन्तै एल्बम मा ट्रयाक हस्तान्तरण, प्रयोगकर्ता मौका छ। मेमोरी कार्ड बाट डाउनलोड संगीत पनि सम्भव छ। मिडिया प्लेयर मा प्रस्तुत छ प्लेसूचीहरू एकदम चाँडै गठन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा एल्बम समारोह मेटाउने निर्माता द्वारा प्रदान गरिएको छ। प्लेब्याक विकल्प अंधाधुंध उपकरण उपलब्ध छ। साथै, प्रयोगकर्ता सधैं ट्रयाक मा पूर्ण जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँको फोन मिडिया प्लेयर मा के प्रतिक्रिया?
मिडिया प्लेयर ज्यादातर सकारात्मक द्वारा मा नोकिया 1030 फोन दोहोरो बारेमा बोल्न। तर, केही कमीकमजोरी उहाँले अझै पनि छ। पहिलो, हामी दृश्य तस्बिरहरू को लामो लोड ध्यान दिनुहोस् गर्नुपर्छ। यस मामला मा, लामो ट्रयाक ढिलाइ संग फिर्ता प्ले गर्न सकिँदैन। तुरुन्त आफ्नो मेमोरी कार्ड बाट धुनहरू एक लामो समय को लागि बाहिर छ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
हामी प्रयोगकर्ताहरूले नियन्त्रण प्रणाली प्रशंसा गर्नुभएको लाभ कुरा भने। एक सुविधाजनक स्थान मा स्थित यो मामला मा उल्टा बटन। को हेडसेट को पहिचान को यो सिस्टम गर्दा छिटो हुन्छ। ट्रयाक जानकारी एकदम व्यापक प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, धेरै मालिक कारण ध्वनि प्यानल देखि समायोजित गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई गर्न मोडेल "नोकिया 1030 मा" प्रशंसा गरेका छन्। यस मामला मा, चाँडै प्रदान बटन को संगीत निर्माता बन्द।
को स्मार्टफोन "नोकिया 1030 मा" के समावेश छ?
मोडेल "नोकिया 1030" को घटक एक मानक प्रकार छ र केहि अतिरिक्त, अर्थात् टेलिफोन निर्देशन समावेश गर्दैन। बक्समा हेडफोन तपाईं सामान्य पाउनुहुनेछ। तिनीहरूलाई ध्वनि गुणवत्ता औसत छ। साथै, यो समावेश गरिएको छ ब्याट्री राम्रो शक्तिशाली छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। कवर, दुर्भाग्यवश, devaysa "नोकिया 1030" हराइरहेको छ, र यसको मालिक अलग किन्न हुनेछ।
सामान्य उपकरण सेटिङहरू "नोकिया 1030"
आफ्नो स्मार्टफोन नोकिया लार्ज दोहोरो 1030 मा यन्त्र सेटिङ लागि अवसर एकदम धेरै छ। सीधा निरीक्षण व्यक्तिगत अनुप्रयोगहरूको काम पहुँच ट्याब सम्भव छ। बारी मा, उपकरण मा सम्पर्क नियुक्त गर्न धेरै सजिलो छ। प्रयोगकर्ता मात्र ग्यालरी बाट रिंगटोन डाउनलोड गर्न सक्षम छ, तर पनि मेमोरी कार्ड। यस मामला मा, कल सधैं अनुगमन गर्न सकिन्छ।
तिनीहरूलाई बारेमा जानकारी उपकरणको मुख्य मेनुमा देख्न सकिन्छ। सीधा मोडेल सेटिङमा ध्वनि सेटिङहरू नियुक्त। एक स्थानीय समूह जाने क्रममा, प्रयोगकर्ताले सम्पर्क ट्याब चयन गर्न आवश्यक छ। एक विशेष सेवा आवेदन गर्न सुरक्षा ट्रयाक गर्न चलिरहेको छ। यसको मापदण्ड हेर्न मुख्य मेनुमा हुन सक्छ।
यस स्मार्टफोनको विशेष सुविधाहरू "नोकिया 1030"
नोकिया 1030 दोहोरो सिम फोन को सेटिङ जाने मुख्य मेनुबाट हुन सक्छ। यस मामला मा, सुरक्षा सेटिङहरू एक प्रयोगकर्ता आफ्नै निर्दिष्ट गर्न सक्षम छ। यस मामला मा, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन पनि सम्भव छ समायोजन गर्नुहोस्। प्रणाली को काम मा रिपोर्ट हेर्न, तपाईं सुरक्षा ट्याबमा जानुहोस् गर्न आवश्यक छ। आवश्यक भएमा, बन्द स्क्रिन मोड चुनिएको गर्न सकिन्छ।
यस फोन मा जगेडा सुविधा पूर्वनिर्धारित सक्षम छ। यो उपकरण भाइरस सुरक्षा त्यहाँ एक एकदम विश्वसनीय र प्रभावकारी हुन्छ। तपाईं ग्राहक समीक्षा विश्वास भने, यो बन्द यसलाई चाँडै, आवश्यक भएमा गरिएको छ। समायोजित गर्न स्क्रिनको क्यालिब्रेसन, तपाईं उपकरणको मुख्य मेनु प्रविष्ट गर्न आवश्यक छ। अर्को, प्रयोगकर्ता प्रदर्शन को लागि जिम्मेवार छ जो ट्याब, जाने गर्नुपर्छ। प्रमुख अद्यावधिक मालिक हेर्न सक्षम छ। यस मामला मा, अलग प्रदर्शन ढाँचा सेट गर्न सकिन्छ।
आफ्नो स्मार्टफोन नोकिया लार्ज RM 1030 मा प्रदर्शन सेटिङहरू लागि उपकरण थोडा छ। तिनीहरूलाई सार्न गर्न, तपाईं मुख्य मेनु चयन गर्न आवश्यक छ। यस मामला मा, स्क्रिनमा पृष्ठभूमि छवि चयन गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यालरीमा यो मानक तस्बिरहरू धेरै यो उद्देश्य लागि प्रतिनिधित्व छ। भने उपकरण छिटो पहुँच प्यानल अलग कन्फिगर गरिएको छ। यो मोडेल मा जोड दिंदै उन्नत ट्याबमा विकल्प मार्फत सेट गर्न सकिन्छ।
यस उपकरणमा समय सुधार समारोह उपलब्ध छ। प्रदर्शन को लागि तम्तयार मोड सेटिङ ट्याब कार्य सेट छन्। को स्मार्टफोन "नोकिया 1030" प्रयोगकर्ता मा फन्ट पनि परिवर्तन गर्न सक्षम छ। यस मामला मा, निर्माता तीन स्थान छ सबै छ। प्रदर्शन को अनुपातमा परिवर्तन गर्न, तपाईं मुख्य मेनुमा जानुहोस् पर्छ।
को "नोकिया 1030" उपकरण मा जो आयोजक?
यो स्मार्टफोन नोकिया 1030 लार्ज उपयोगी कार्यक्रम पर्याप्त मात्रा मा उपलब्ध छ। यो मोडेल मा क्याल्कुलेटर एक सरल प्रयोग गर्दछ। सरल गणितीय समस्या समाधान गर्न यो पूर्ण फिट। पनि यो संग प्रयोगकर्ता संख्या को प्रतिशत गणना गर्न सक्छन्।
एक सुविधाजनक मेनू संग स्थापित भएको स्मार्टफोन मा पात्रो। तपाईं उपभोक्ताहरु को समीक्षा विश्वास गर्नुहुन्छ भने, छोड गर्न सम्भव छ कि टिप्पणी। साथै, मालिक प्रियजनहरूलाई को जन्म मिति को दिन बचत गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुराहरु, यो मुख्य मेनु सेट छन् भनेर घण्टा उल्लेख गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
ZTE V790: एक सिंहावलोकन, विनिर्देशों, फर्मवेयर र मालिकको समीक्षा
को स्मार्टफोन Explay हीरा पूर्ण सिंहावलोकन
एउटा iPhone को स्मार्टफोन फरक छ के तपाईं थाह
स्मार्टफोन "सैमसंग A3": मालिकहरूको समीक्षा र मोडेल प्रदर्शन को समीक्षा
फोन "फिलिप्स ई 560": समीक्षा र सुविधाहरू
पहिलो सकारात्मक रक्त समूह। रहस्य unraveled।
मास्कोमा ग्रीक रेस्टुरेन्ट: ठेगानाहरू, मेनूहरू र आगन्तुकहरूको प्रशंसापत्र
एक पट्टी र tourniquet imposing शासन। bintovyh ड्रेसिङ विषयमा नियमहरू। एक दबाव पट्टी imposing नियमहरु
राज्य वा गैर-राज्य - जो एक पेन्सन कोष चयन गर्न? पेंशन कोष गर्न संक्रमण
Yota इन्टरनेट गति को वितरण प्रतिबन्ध बाइपास
Polypropylene - पग्लनेबिन्दु तापमान, गुण र विशेषताहरु
चुभास राज्य कला संग्रहालय (चेबोकसारी, चुभास गणतन्त्र): प्रदर्शनियों, घटनाहरु
नस्ल hens: आफ्नो मतभेद र peculiarities
विज्ञापन विज्ञापन को प्रकार को एक उदाहरण
टमाटर संग सकरखण्ड को हिउँदमा सलाद: तस्बिर संग व्यञ्जन
वयस्क मानिस र एक जवान केटी: पागलपन वा सादा जोडी?
एन्टेना टिभी: आफ्नै हात छैन त गाह्रो के